चलचित्र निर्माता रम्भा ओली र उदय पुनको निधन ! « MNTVONLINE.COM
चलचित्र निर्माता रम्भा ओली र उदय पुनको निधन !
काठमाडौँ । चलचित्र निर्माता तथा कलाकार रम्भा ओलीको निधन भएको छ । ओलीको हृदयघातका कारण आज शुक्रवार साँझ नर्भिक अस्पतालमा निधन भएको रंगपत्रकार लक्ष्मण सुवेदीले जानकारी दिएका छन् । ५० बर्षिय ओलीले बुवाआमा, सुर्यचन्द्र, वीरलगायत चलचित्र निर्माण गरेका छन् । उनको आजै पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येस्टि गरिएको छ ।
त्यस्तै निर्माता उदय पुनको पनि आजै निधन भएको छ । उनको निधन भएको निर्माता, प्रदर्शन प्रदीप कुमार उदयले जानकारी दिए । पछिल्लो समय फिल्म क्षेत्र बाहिर रहेका पुनले ‘पैसाको धम्की’, ‘सारङ्गी’लगायत फिल्म निर्माण गरेका थिए ।
कंगना विरूद्धको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै
मन्दिरमा चुम्बन गरेको दृश्यले भारतमा नेटफ्लिक्सको आलोचना सुरू
विवाहको माैसम- एकैपटक ५ वटा विवाह गीत सार्वजनिक